किन यो छ कि कुनै जोडीले तपाईलाई सन्तुष्ट गर्दैन? | बेजिया
किन यो छ कि कुनै जोडीले तपाईलाई सन्तुष्ट गर्दैन?
मारिया जोस रोल्डन | | सम्बन्ध
यो धेरै व्यक्तिलाई हताश हुन सक्छ, तथ्य यो हो कि तिनीहरूको कुनै पनि साझेदारले तिनीहरूलाई कहिल्यै सन्तुष्ट गर्दैन। के एक अलग घटना जस्तो लाग्न सक्छ सामान्यतया तपाइँ सोचे भन्दा बढी हुन्छ।
पूर्ण वा पूर्ण सन्तोषजनक सम्बन्ध हुनु धेरै गाह्रो छ। अर्को लेखमा हामी मुख्य कारणहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं किन एक व्यक्तिले आफ्नो पार्टनरबाट असन्तुष्ट र सन्तुष्ट महसुस गर्दछ।
1 एक चलचित्र को प्रेम वा आदर्श
2 डिप्रेसनबाट सावधान रहनुहोस्
3 वातावरण पनि असर गर्छ
4 निरन्तर र आजीवन असंतोष
एक चलचित्र को प्रेम वा आदर्श
धेरै अवसरहरूमा जोडी उनीहरूको आफ्नै प्रेमको आदर्शताको कारण फलस्वरूप आउँदैनन्। तपाईंले कुनै प्रकारको अपेक्षाहरू प्रस्तुत गर्नुपर्दैन, प्रायः जसो वास्तविकता सामान्यतया केहि फरक हुन्छ। उत्तम जोडी केवल चलचित्रहरूमा अवस्थित हुन्छ र सम्बन्धमा राम्रो कुरा र नराम्रो चीजहरू हुन्छन्। सबै पक्षहरूमा एक सम्बन्ध सफल हुन को कुञ्जी तथ्य मा छ कि पैमाने पूरै सन्तुलित छ।
डिप्रेसनबाट सावधान रहनुहोस्
केहि अवसादग्रस्त एपिसोडहरूबाट पीडित हुनु पनि प्रमुख कारण हो जुन कुनै पार्टनरले तपाईलाई सन्तुष्ट गर्दैन। उदास हुनु मायालाई मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुको भन्दा फरक देखिन्छ। जब कसैलाई चाहेको वा माया गर्ने कुरा हुन्छ, व्यक्तिसँग सकारात्मक मानसिकता हुनुपर्दछ र उदासिनता वा उदासिनता जस्ता नकारात्मक भावनाहरूबाट टाढा रहनु पर्छ।
वातावरण पनि असर गर्छ
वातावरण पनि गर्नुपर्दछ जब यो उत्तम पार्टनर फेला पार्न आउँदछ। या त परिवार वा साथीहरूले एक जोडी मोडेल बनाउँदछ जुन प्राय: गाह्रो हुन्छ। प्रश्नमा व्यक्ति अर्को व्यक्तिको प्रेमको खोजीमा हुँदैन जुन उसलाई भावनात्मक स्तरमा भर्न सक्दछ, तर वातावरणमा के चाहिन्छ जस्तो देखिन्छ। यो दिईएको खण्डमा साथीहरू वा परिवारले के चाहन्छ भनेर पन्छाउनु महत्त्वपूर्ण छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्।
निरन्तर र आजीवन असंतोष
यो आजको समाजको ठूलो हिस्सा कुनै पनि कुरामा असन्तुष्ट हुन र निरन्तर असन्तुष्टि देखाउन एकदम सामान्य र सामान्य छ। व्यक्ति अधिक र अधिक चाहान्छ र अरू व्यक्तिसँग सम्बन्ध समावेश सहित केहिमा सन्तुष्ट हुँदैन। यस पुरानो असन्तुष्टिले एक व्यक्तिको आत्मसम्मान र सुरक्षालाई क्षति पुर्‍याउँछ र अत्यन्त कमजोर। प्रेमको क्षेत्रमा अग्रसर हुन र तपाईंलाई सन्तोष गर्ने व्यक्तिसँग खुशी रहनको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ।
संक्षिप्तमा, त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जुन ज्यादै मांगमा पर्दछ जब यो कसैसँग सम्बन्ध राख्नको लागि आउँदछ। यो सामान्य रूपमा सामान्य कारणले गर्दा कि कुनै पनि जोडीले फल फलाउँदैन र समयसँगै ब्रेक अप गर्दछ। यो दिईएको खण्डमा, मागलाई एकातिर राख्नु र हृदयको लागी धेरै कुरा सुन्नु राम्रो छ। कुनै सिद्ध सम्बन्ध छैन, किनकि यो मात्र चलचित्रहरू र उपन्यासहरूमा हुन्छ। एक जोडी अपूर्ण छ र यो भन्दा पहिले यो राम्रो र नराम्रो चीजहरूको बिच सहि सन्तुलन पाउन महत्वपूर्ण छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मनोविज्ञान र जोडी » सम्बन्ध » किन यो छ कि कुनै जोडीले तपाईलाई सन्तुष्ट गर्दैन?
पेड्रो Ximénez सॉसमा पोर्क टेंडरलिन
कालो लुगा गर्मी को लागी पनि हो